पूर्वलडाकु मलेसियाबाट भन्छन्ः प्रचण्ड ज्यु !अकर्मण्यताको खाल्डोबाट कहिले निस्किने ?
टेकबहादुर राना प्रकाशित: २०७५-८-६ गते
काठमाडाैं । नेपालमा माओवादी पार्टिको जनयुद्धताका जत्तिकै उचाई पहिलो संविधान सभामा सम्म मात्रै रह्यो । त्यो समयमा विवादास्पद छवि भएका बाहेक अन्य जोसुकैलाई उम्मेदवार बनाउँदा पनि चुनाव जित्ने परिस्थिति थियो ।
चुनावमा अधिकांशले जित हाँसिल पनि गरेकैहुन् । पुराना संसदवादी दलहरू बाट आजित भएका जनता धेरैले ठूलो अभिलाषाका साथ र केहिले त्रासका बिचपनी भोट दिएर झन्डै बहुमत नजिक पुर्याएका थिए। यद्यपि जित पछि शहर केन्द्रित भएका माओवादी नेताहरु आत्मा केन्द्रित बन्दै गए। उनिहरुमा पाए जति आफै खाउँ भन्ने मानसिकता हावी हुँदैगयो । मेरै गोरुको बाह्रै ट्क्का भनेझैँ सरकारका महत्त्वपूर्ण पद आफैले राख्न खोज्दा ‘नत गाईको थुनमा नत बाच्छाको मुखमा’ भनेको जस्तै भयो ।
प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रालय बाहेक अरु हात हातलाग्यो शुन्य जस्तै भयो । सत्ताको अनुभव न्यून हुनु र विद्रोही मानसिकताको दम्भ देखिनुले उसलाई ओरालो तर्फ धकेलिदियो । सरकारमा पनि पहिलाकै जस्तो रवैया कायमै रह्यो । पशुपतिको मुल भट्ट हुँदै कटुवाल काण्डसम्म आउँदा अन्ततः सत्ता बाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको मुल कारण अपरिपक्वता, अधैर्य, जनसेना र जनमतको दम्भ एवं सबैलाई बुझाएर रुपान्तरण गर्न नसक्ने पात्रहरुका कारण फेदमा पुगेर थँचारिनु परेको सर्वबिदितै छ ।
महत्वपुर्ण भनिएको सेना समायोजनमा आफ्ना मुलभुत सिद्धान्त बाट चिप्लिएर प्रतिक्रिया वादिकै लाइनमा ल्याप्छे हान्दै जनमुक्ति सेनालाई अपमानजनक तरिकाले केही सयको संख्या समायोजनको नाममा विलीन गर्ने काम भयो।त्यसको परिणाम दोस्रोपटकको संविधान सभाले तेस्रो स्थानमा खुम्चिन बाध्य बनायो। त्यो स्थितिसम्म आउनुमा प्रचण्डका विश्वासिला पात्र भन्नेहरूको ठुलै भुमिका रह्यो । उनैका कारण पार्टी रहन्छ कि रहन्न भन्ने स्थितिसम्म देखापर्यो । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको नतिजा त झनै दयनीय हुन पुग्यो ।
प्रचण्डमा एउटा आफ्नै खालको बिशेषता छ । जुन निकै खतरनाक र आत्मा केन्द्रित छ । उनी जहिल्यै पदमा रहिरहन चाहान्छन् । त्यो भनेको पार्टी एकताको नाममा विघटन गरेर हुन्छ कि, पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर हुन्छ वा प्रतिक्रियावादीहरुसँग हात मिलाएर हुन्छ उनी पछि पर्दैनन् । त्यसका निम्ति आफ्नो नजिक हुनेहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले प्रभावमा पारेर त्यो काम गरेरै छाड्ने ढिपिलाई कतिपयले चमत्कार भन्ने गर्छन् । त्यो चमत्कार नभएर कुटिल चाल मात्रै हो । पछिल्लो समय एमालेसँगको एकता, बाध्यता को उपजका रुपमा लिन सकिन्छ । रणनीतिक रूपमा बुझ्दा केपि शर्मा आेली र उनी इतरकालाई फकाएर प्रचण्ड एकपटक कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न चाहान्छ्न । त्यसैको निम्ति हिजो उनैले भारतीय दलाल भन्ने गरेका आेलीले जस्तोसुकै कदम चाल्दा पनि मौन समर्थन जनाउँदै छन् ।
सुन काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, निर्मला हत्या काण्ड र रास्ट्रपतिको विलासी जिवनका लागि छुट्याएको १८ करोडले प्रचण्डलाई भित्रभित्रै पोलेकै भएपनी बाहिर मौन देखिन्छन् । पार्टी एकता पछी संगठन भित्र भएको भद्रगोलमा एक तवरले अाँखा चिम्लेरै बसेका छन् । त्यसका साथसाथै यतिबेला आफु नजिक धाउने, सधैं गुणगान गाउनेहरु प्यारा बन्दैछन् । चाहे उनिहरु हिजो टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु नै किन नहोउन । शहिद, घाइते र बेपत्ताको भन्दापनी आफ्नै परिवार मोह ह्वात्तै बढेर गएको छ । हिजो कयौंपटक मृत्यु र मुक्तिका निम्ति साथ दिने सहयात्रीहरु बिस्तारै टाढा हुँदैछन् ।
एकातिर भजनमण्डलिले किर्तन गाएर उक्साउने र अर्कोतिर प्रचण्ड स्वयं त्यसैलाई सर्वेसर्वा ठानेर उही भुलभुलैयाको दलदलमा कुँजिदै ओरालो तर्फ दौडिरहने अवस्थाले भविष्यमा डरलाग्दो खतरा निम्त्याउने पक्का छ । कामना गरौं बेलैमा अकर्मण्यताको खाल्डोबाट निस्किएर सबैलाई समेट्दै जनताबाट प्राप्त दुई तिहाई मतको कदर गरेर महंगी, भ्रष्टाचार, हत्या, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा भए गरेका गलत कदम विरुद्ध बेलैमा ध्यान जानेछ । यद्यपि अब पनि अँखा चिम्लेर बस्ने हो भने नेपाली जनताले रामराम भन्न बाहेक काँध थाप्न सक्दैनन् भन्ने मानेमा ढुक्क बन्दा अनुकुल हुनसक्छ ।
लेखक पूर्वजनमुक्तिसेना टेकबहादुर राना हाल मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दुई पुस्तक लोकार्षण
देउवाले बनाए यी पाँच जनालई महासमिति सदस्य
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने, यस्ता छन् एजेण्डा
घरभाडा लिएको समाचारप्रति सांसद योगेश भट्टराइको आपत्ति
प्रचण्डतिर फर्किदै ओलीले भने, 'संविधानमा मिल्ने भए हामी दुबै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौ'
श्रीलङ्काका अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घ ५१ दिनपछि पुनर्बहाली
जागिर खोज्दै जनता, नास्टमा भने छैन पर्याप्त जनशक्ति
गगन थापादेखि गल्यो सरकार, आजैदेखि हट्यो जोर विजोर प्रणाली !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महासमिति बैठकका लागि पाँच जना सदस्य थपेका छन् । उनले सांसद विनोद चौधरी, गोरखाका स्वर्णिम वाग्ले, पर्साका अनिलकु..
लेखक खगेन्द्र संग्रौलाको प्रश्न: शितल निवास राष्ट्रपति निवास कि बडामहारानी निवास ?
काठमाडौ । लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले शितल निवास दरबार राष्ट्रपति निवास नभएर बडामहारानी निवास भएको उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा स्ट्याटश पोष्ट गर्दै उनले लेखेका..
आगलागीले पार्यो सखाप, ६ घर खरानी, १० लाखको क्षति
लहान । गाईगोठबाट सल्केको आगो फैलिएर सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका–७ बगबिरा टोलमा गए राति भएको आगलागीमा ६ वटा घर जलेर खरानी भएको छ । आगलागीबाट करीब रु १० लाख बराबरको क..
झलनाथ खनालको आक्रोसः प्रधानमन्त्री ओली राजा महाराजा हो र ? कि सन्त महन्त हो ?
काठमाडाैं । नेपाल कमयुनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीको कार्यशैली सहि ढंगले गतिमा नगएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । एक रे..
पत्रकारिता र बालसंवेदनशीलता
नेपालको संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत समेटेको छ भने बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनु राज्यको नीति हुने कुरासमेत स्पष्ट पारेको छ । बालबालिका समाजका संवेदनशील..
घरबेटीको साम्राज्यमा डेरावालका पीडा
मानिसहरू बिभिन्न काम विशेषले आफ्नो घर छोडेर देशका बिभिन्न शहर र जिल्ला सदरमुकामहरूमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । कोही मानिसहरू अध्ययनको सिलसिलामा आफ्नो प्यारो घर छोड्न बाध्य छन् भ..
सूचना, सञ्चार र सरकारी सूचना प्रवाहमा सरकारको अघोषित नियन्त्रण
काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका सूचना प्रत्येक बिहीबार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मलेनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारीको बारेमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन..